सुनको मूल्य अहिले सम्मकै महँगो, लाख नाघ्यो कति पुग्यो अहिले ? – दर्पण छायाँ
मुख्य पृष्ठअर्थ/बाणिज्यसुनको मूल्य अहिले सम्मकै महँगो, लाख नाघ्यो कति पुग्यो अहिले ?
Admin | २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १३:०८	Comments
काठमाडौँ,- साताकाे पहिलाे दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा २०० रुपैयाँले बढेकाे छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको २०० रुपैयाँले बढेर एक लाख दुई हजार ८०० रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकेा छ ।
यसअघि, गत साताकाे अन्तिम दिन शुक्रबार सुन तोलाको एक लाख दुई हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतबार तेजावी सुनको भाउ तोलाको एक लाख दुई हजार ३०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएकाे छ । चाँदीको भाउ पनि तोलमा १० रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार एक हजार ४१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आइतबार एक हजार ४२५ रुपैयाँमा निर्धारण भएको छ ।
यो पनि,आयात बढेसँगै व्यापार घाटा चुलिएको छ । व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड बराबर पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ३८ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा निर्यात आयात अनुपात ११ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ ।
सात महिनाको कुल वस्तु आयात ४२ दशमलव ८ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ। भारतबाट ३१ प्रतिशत, चीनबाट ४२ दशमलव ३ प्रतिशत र अरु देशबाट ८३ दशमलव ८ प्रतिशतले आयात बढेको राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल,
गाडी तथा पाटपुर्जालगायतका सामानको आयात बढेको छ । निर्यातको मात्रा पनि केही बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा वस्तु निर्यात ८८ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ३१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
भारततर्फको निर्यात ११३ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यात भने १२ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । अरु देशतर्फको निर्यात पनि २७ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालबाट पाम तेल, सोयाबिन तेल, पिना, धागो, जुसलगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ । अलैँची, चिया, जडीबुटीको निर्यात भने घटेको छ ।
“दु’र्घटनामा परेरमा, शिक्षक शर्माको कैलाश खोलामा अ’न्तिम दा’हासंस्कार गरियो” २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १३:०८
पाकेट मा’रेको आ’रोपमा अभिनेत्री रुपा प’क्राउ’ २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १३:०८
जन्ती बो’केको टिपर दु’र्घटना : दुई ज’नाको ज्या’न गयो, २४ जना घा’इते २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १३:०८
म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अर्थको अनुमति २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार १३:०८